Isinamoni: igobolondo elisha le-Linux Mint | Kusuka kuLinux
Isinamoni: igobolondo elisha le-Linux Mint
Njengoba kushicilelwe ku- Ukuvuselelwa Kwewebhu8, I-Cinnamon Kuyinto a Imfoloko yeGnome Shell kuqalwe ngu UClement lefebvre, umholi wephrojekthi I-Linux Mint, esezigabeni zayo zokuqala zokuthuthuka. Kususelwa kwezinye zezinto ezinikezwa yi-MGSE (Mint GNOME Shell Extensions), kepha inhloso yokugcina kufanele kube ukudala i-interface yakho yedeskithophu (okusho ukuthi, iShell ephelele).
Inhloso akuyona enye ngaphandle kokwenza ukusetshenziswa kwe-Gnome 3 kukhululeke kakhudlwana kubasebenzisi be-Gnome 2. Ukwenza lokhu, basusa iphaneli eliphezulu bese bedlulisela indawo yesaziso kuphaneli engezansi, elizama ukuphindaphinda ngokubonakala ngangokunokwenzeka futhi ukusebenza ebesikuGnome 2.
Ngokusho kukaLefebvre uqobo:
ICinnamon ngumphathi wedeskithophu ye-Linux, enikezela ngezici ezithuthukisiwe zokuqamba kanye nesipiliyoni somsebenzisi wendabuko. Idizayini yedeskithophu iyefana neGnome ngobuchwepheshe obuvela kwaGnome Shell.
Okwamanje, iCinnamon itholakala kuphela ngeGithub. Ngakho-ke manje ungalanda ikhodi yomthombo bese uyihlanganisa, ungakhohlwa ukuthi isenguqulweni yokuhlola nokuthi akunconywa ukuyisebenzisa kuma-desks omsebenzi.
Uyibona kanjani? Ingabe bekuyisinyathelo esiqondisweni esifanele?
Umthombo: I-WebUpd8 & I-Cinnamon
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Isinamoni: igobolondo elisha le-Linux Mint
Okunye okuthakazelisayo 🙂
Akubonakali kimi. Ngiyayithanda i-gnome3, idinga nje ukuthuthukiswa okwengeziwe, futhi bangafaka isandla ekuyithuthukiseni esikhundleni sokuhamba ngendlela yabo (baye kubuntu). Nginokuhlolwa kwe-debian gnome3 futhi kuhamba kahle kakhulu. Kukhombisa ukuthi idinga ukuthuthuka okwengeziwe, kepha uma uqala ukuyisebenzisa iba nobungani. Ngakolunye uhlangothi, ubumbano lubonakala lulayishwe kakhulu futhi "luyisiphukuphuku" ("lezi ezinye zezinhlelo zokusebenza ezifakiwe, lezi ongazifaka" futhi ngubani okutshele ukuthi ungenzele leso sibikezelo?), Kepha kuyezwakala "kuqediwe ". Ngicabanga ukuthi into yeMint isinyathelo sokusebenzisa ngokunenzuzo igebe elivele lacaca. salu2
UJesu Franco kusho
Ngiyawuthanda umqondo, ibha ephezulu ekuyo yonke indawo yeGnome 3 ibonakala njengekhophi engacacile ye-Android (ingasaphathwa iMac), futhi iMint ibilokhu isinikeze umklamo omuhle; Nginesiqiniseko sokuthi kuzoba nokushaya okukhulu, kanye nokusebenzisa ubuchwepheshe be-Gnome obungaphezu kwemiphumela ye-3D kuphela.
Ngokuqondene nobumbano, awu, njengoba ngangihlale ngisho, indlela exaka ngayo negama ...
Phendula uJesús Franco
Ngicabanga ukuthi kufanele usebenze kancane ku-gnome3 kanjena. Ngithanda imibono eminingi abanayo, futhi abaningi babo abayithandi, futhi ngicabanga nokuthi banezimbungulu ezimbalwa noma okungenani izinto okufanele bazilungise, kepha bakhomba kahle.
kodwa into eyodwa abantula ngayo ukwenza ngokwezifiso okwengeziwe, futhi angibhekisi kuzandiso, okuwumqondo omuhle kakhulu eduze kwekhasi lezandiso, kepha, ngokwesibonelo, lezo zandiso zingasuswa zisuswe ziye endaweni ziye ngisho nasephaneli, okulungile ngokuchofoza ukuthi ziyalungiswa (angazi noma ngabe kuyiphutha lezandiso ezingakwenzi noma inketho ilahlekile ku-API).
Ngicabanga ukuthi ngohlelo lwezandiso akwenzi mqondo omkhulu ukwenza igobolondo elisha, angiyithandi ngempela, ngingathanda ukuthola izinketho eziphakanyisiwe kugobolondo elikhona manje. bese uyipholisha kancane kulowo okhona.
kepha ngicabanga ukuthi basendleleni enhle kakhulu 😀
Inkinga ukuthi, i-GNOME inedumela lokungazamukeli iziphakamiso. Benza ideski ngendlela abafuna ngayo, isikhathi, uma abanye bengayithandi, kuyinto abangakhathaleli ngayo.
Ngaphezu kwalokho, uClem nethimba lakhe benze umsebenzi oncomekayo. Namuhla akukho ukuqhathanisa phakathi kweGNOME Shell neCinnamon, eyokugcina iyishanela cishe kuyo yonke into.
Igama le-Brain Drain kusho
Ngiyilinda ku-Arch yami, ukuze ngikwazi ukususa iGnome 3
Phendula ku-Brain Drain's Fellword
Sekuphele inyanga ngiyisebenzisa futhi yinhle kakhulu, kunezinto ezithile engingazithandi kodwa ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizothuthuka.
I-Google nakanjani iyahlukana (+ Ukuhlolwa + Ividiyo)
Abashayeli be-Android babuyela ku-Linux Kernel 3.3